असार १७, काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्सले असार २५ गतेदेखि आईपीओ विक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले बुधवार आव्हान पत्र जारी गर्दै रू. ३० करोड बराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ विक्री गर्ने जानकारी दिएको छ ।
सर्वसाधारणका लागि छुट्याईएको कुल ३० कित्ता आईपीओमध्ये कम्पनीले १ लाख २० हजार कर्मचारीका लागि र १ लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएर बाँकी रहेको २७ लाख ३० हजार कित्ता सार्वजनिक निष्कासन मार्फत विक्री खुला गर्न लागेको हो ।
छिटोमा असार २९ र ढिलोमा साउन ८ गतेसम्म विक्रीमा रहने यस आईपीओ खरीद गर्न चाहनेले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधितम १० हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
अजोड इन्स्योरेन्सको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले आधारभूत पक्ष औषतभन्दा तल रहेको संकेत गर्ने ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल रहेको छ ।
विक्री प्रबन्धकसँगै कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय सुन्धारा र धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेका सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै, मेरो शेयर मार्फत घरमै बसेर पनि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले आईपीओ विक्रीका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट असार ७ गते स्वीकृति पाएको थियो । नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा पहिला आईपीओ विक्रीको लागि यस कम्पनीले स्वीकृति पाएको हो ।
यस कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ३ करोड ५१ लाख खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिसमम रू. २ करोड ६० लाख थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको नाफा ३५ प्रतिशत बढी भएको हो ।
यस वर्ष कम्पनीले रू. ६० करोड ६३ लाख कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । बीमाशुल्क आर्जन बढ्दै गएकाले आगामी दिनहरुमा व्यवासायिक विविधिकरण गरी गुणस्तरिय ग्राहकमुखी नयाँ सुविधा शुरू गरी अझ वित्तीय रूपमा सबल बनाउने योजना कम्पनीको रहेको छ । हाल रू. ७० करोड चुक्तापूँजी रहेको यस कम्पनीको आईपीओ निष्कासन पश्चात रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी कायम हुनेछ ।
२०७५ असार २१ गतेदेखि यस कम्पनीले औपचारिक रुपमा कारोबार शुरु गरेको हो । यस अवधिसम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५ दशमलव शून्य २ र प्रतिशेयर नेटवर्र्थ रू. ११२ दशमलव ४६ छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा रू. ३ करोड ३३ लाख रहेको छ भने बीमाकोष रकम रू. ४ करोड ८१ लाख रहेको छ ।
आयोजनाको म्याद ६ महीना थप गरौं[२०७७ सावन, १]
कर छल्ने कम्पनी र फर्म राजस्वको फन्दामा[२०७७ सावन, १]
महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदन : सरकारी बेरुजूमा झीनो सुधार[२०७७ सावन, १]
आजदेखि सञ्चालन हुँदै साझा यातायातका बस[२०७७ सावन, १]
भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि सेनाको ब्यारेक आँपटारी सार्ने तयारी[२०७७ सावन, १]
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन १४.९० अंक बढेर बन्द भयो नेप्से, कारोबार रकम १ अर्बभन्दा माथि[२०७७ असार, ३१]
मितेरी डेभलपमेण्ट बैंकको बोनस शेयर सूचीकृत [२०७७ असार, ३१]
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको सदस्यको पदावधि समाप्त[२०७७ असार, ३१]
१३५६.५१ विन्दुमा नेप्से, ८३ करोड ६१ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री (२ बजेको अपडेट)[२०७७ असार, ३१]
कोभिड–१९ को असर होटलमा : तेस्रो त्रैमासमा ओरियण्टल होटल र तारागाउँ रिजेन्सी होटलको नाफा घट्यो[२०७७ असार, ३१]
तथ्यांकोवाच : न्यूनतम विन्दुमा नेत्र प्रसाधनको आयात
आयोजनाको म्याद ६ महीना थप गरौं
क्षमता विस्तार गर्दै सीजी सिमेन्ट
कर छल्ने कम्पनी र फर्म राजस्वको फन्दामा
लकडाउनकै बीच पर्यटनमा ‘नयाँ प्रडक्ट’को खोजी